Sweden sideen ugu Noolaada? (Barnaamij taxane ah) | Somaliska
Sweden sideen ugu Noolaada? (Barnaamij taxane ah)
Asalamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabrakaatuhu :
Salaan diirran ayaan dhammaan hawlwadeenada bogga somaliska.com. Gaar ahaan Jimcaale , aadbaan ugu farxaa markaan daalacdo mareegtaan bulshada soomaaliyeed ee Iswiidhan,wararka dhexdeena ah yaan ku kala qaadanaa.
Waxbarasho heer sare ahna ka socoto isla markaana bulshada talooyin wax ku oola ka daalacdaan. Arimahaa ayaa igu dhiirigeliyay, iina sahashay inaan la qaybsado walaalaheeyga talo, iska markaana mida waaluhu soo gudbiyaana ka daalacdo.
Inbadan markaan dheehday bulshadeena Soomaaliyeed ee Qurbaha gaar ahaan reer Sweden, ayaan gartay ineey lama huraan tahay qof walba wixii uu walaalkii kale kula talin karo inuu u sheego ineey lama huraan tahay, tusaale walaalkii wadanka 15 sano joogay haddii uu la taliyo kuwa gadaashii yimaada wax badan ayay ka faa’iidayaan.
Kuwaa cusubna hadhoow waxay ku dhiiranayaan ineey la taliyaan kuwa ka danbeeya ee imaanaa ama yimid markaa. Qofkeena maanta soo caga dhigtay wadanka waa inuu helaa , talo iyo jihayn toosan. Ardaygeena Jaamacada dhiganaa waa inuu la taliyaa , midka Dugsiga sare dhiganaa, kan D.sare dhiganaana waa inuu la taliyaa midka D.dhexe dhiganaa, keena SAS-ka (Svenska för Andra Språk) dhiganaana waa inuu la taliyaa midkeena SFI-ga (Svenska för Invandrare) dhiganaa, waa hubaal markaa inaan noqonayno bulsho liibaanta.
Bulshadeena soomaaliyeed dhaliilaheey leedahay waxaa ka mida, isagama digto qataraha markaa jira ama wax kama qorto dhacdooyinka kuwooda xumaa ama wanaagsanaa.
Tusaale :-da’yarteenii Soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba , Tahriib ayaa lagu ibtileeyay, kuwa boosaaso ka baxay inteeysan Yemen gaarin baddii ayaa Yaxaas badeed ku cunaa ama doonta laga tuuraa, ama waaba qalibmayaan, inyar maahan e. Intii yareed ee ka badbaaday shilkaa halista ah kuwii Boosaaso joogay uma digayaan, ee waa nabad tagnay ayay leeyihiin saxaraha ayayna afka sii saarayaan.
Marka qayb yar maahan e intii kale saxaraha lama degaanka ah ku le’daan, intaa yare e Liibiya tagtay kuwa Yemen kazoo baxaa ugama digaan dhibka saxaraha sidoo kale kuwa Malta joogana kuwa Liibiya jooga uma digayaan, xitaa inaga qurbaha joogna kuwii Dalkii joognay uma digno, ee sidaan ugu soo ibtilayn lahayn qaxootinimo iyo qurbo ayaan u istaagnaa, dalkiina uga soo faarujin lahayn inta ku hartay, haddaad qofka soomaaliga waydiido, su’aal ah Qurbaha intee ku ganacsantahay wuxuu leeya, Allaha iga wado balaadaya , haddana wuu soo wadaa dadkii ka danbeeyay.
Talo la’aantaana waxay na dhaxalsiiday in qof walba dhibkii soo taabto . Sheekho aanan wada xasuusan ayaa ahayd : Seddex ninoo soomaali ah, ayaa moqor ( god geedaha ku dhexyaal oo surta/malabka laga jabsado ) isi soo dul taagay. Midkii ugu horeeyay ayaa is dhahay yaysan ragaan godka caganta kaa hor gelin ee malabka soo cantoobto, nasiib daro abeeso godka ku jirtay ayaa farihii ka qaniintay. Xanuun awgeed goowsaha ayuu isku qabtay , oo gacantii gadaal marsaday. Wuxuuna ku yiri , waryaada suraan/malab soo cantoobsaday, kii labaad ayaa gacantii u xawishay godkii see sidiiyaa ku dhacday, isna sidii kii hore ayuu kii danbe ku sameeyay.
Midkii seddexaadna gacantii ayuu u dirsaday godkii oo isna abeeskiiyaa goostay Dantu waxay biday ineey is waraystaan ileen nin walba faraa maqan, halkaa ayay seddexdoodii ku talo beeleen, Aqristoow ka waran haddii kii hore u sheegi lahaa dhibka yaal godka ?
Dabdan wuxuuba heli lahaa caawimaad oo ragaan caafimaadka qaba ayaa caawin lahaa, hase ahaatee hadda isma caawin karaan oo nin walba waa dhaawac halisa oo waa sumoobeen. Aad ayay muhiim u tahay in qof walba walaalkii wuxuu ku dhaamo ama waayuhuu u soo joogay uga waramo, maahan in caqli qof kale ka maqan loo buuxinaa. Balse waa midkeen , haddii uu ka war qabo magaalo xaalkeed, ama iskool, ama goob shaqo kan ka danbeeya ha u sheego.
Arimahaan kor kusoo xusay awgood ayaan jeclaystay inaan walaalaheeyga u soo gudbiyo
( 6 Maqaal/Talo ) wixii Alle iga haleeshiiyo.
Aqoontiyo waayo aragnimadu waa iska yartahay , waxaanse rajaynaa in walaalo badan dhiira gelin u noqon doonto insh’Allah talooyin wax ku oolana noo soo qadimi doonaan Insha’Allah.
Lixdaa maqaal waxay kala yihiin sida tan .
1: Sweden sidee ugu noolaadaa : Talo siin qofkaan weli is dhiibin .
2: Sweden sidee Ugu Noolaadaa : Sharciga markaa qaadato , magaaladaa u Guuree maxaa ugu Xilanee .
3: Sweden sidee sugu Noolaadaa : SFI-ga markaan billaabo siddeen haddiiba u dhameeya .
4: Sweden sidee ugu Noolaadaa : SAS-ka iyo maadooyinkiisa .
5 : Sweden sidee ugu Noolaadaa : Ribo la’aan waxbaro shaqaysana .
6: Sweden sideen ugu noolaadaa : Halkee ilmaha Diintooda ku xifdisan karaa?
Mid walba gaarkiisa ayaan u soo qori doonaa Insha’Allah , maantana midkaa aqrisaday wuxuu ahaa Hordhicii iyo gogol dhigii 5 taa Maqaal.
W.Q. Bashiir Macalin Cali ( AbuXudayfah )
Xisbiga dhexe oo ay la soo daristay fadeexad la xiriirta Soomaalida
Swedishka iyo Soo galootiga
Till Bashiir says:
December 26, 2011 at 13:19
Talo Bixin Ku Wajahan Barnaamija Taxana Ah Ee Uu Soo Wado Walaalka Qoray Maqaalkan :
Fadlan waxaa isku xilsaartay arin dadbadan aad mihiim ugu ah
samhällsinformation mana garanayo aqoontaada heerka ey gaarsiisantahay iyo mudada aad ku nooshahay sweden cilmiga aad ku baratay wadanka iyo xirfadaada shaqo wadanka sweden . Fadlan hadii aadan aqoon dheeraad ah aadan u laheen mowduucan 5 maqaal haku degdegin qoraalkooda dambi ayaa kaaga iman kara hadii fidiso fel samhällsinformation waxaan ka mid ahay shaqsiyaadka ka soo shaqeeyey mowducan ee degan sweden waxaa iga talo ah lakaasho howshaada dadka aqoonta u leh ee soomaaliyeed iyo maamulka webbka intaadan usoo gudbin mujtamaca Mahadsanid
Asc\_ dhamaantiin walaalaha soomaliyeed ee muslimiinta ah
intaa kadib waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo walaalkeen Bashiir oo soo qoray arimo fiican oo talo ah waxaana leeyahay wada tashiga iyo in xumaanta layska reebo wanaagana laysfaro waa arinta aynu kaga khayrbadanahay inaku hadaynu muslimiinta nahay umado badan waxaana kale oo kulatalinlahaa qofkan maqaalka iga horeeya qoray inaanuu ka xumaan haduu arku dad soomaaliyeed oo talo isu sheegaya ama khatar isga digaya wabillaahi tawfiiq
ibnu abraar says:
December 26, 2011 at 13:29
Mashaa allah aad iyo aad baad u mahad santahay wllo sida fiican eed barmamijka ugu soo gudbisay walala haaga kale ilaahay ha kaa abaal mariyo anakana hanagu anfaco
insha alah qabaha kalana waan sugaynaa !!!!!!!!!!!!!!!
December 26, 2011 at 14:05
asc waan i dii salamay dhan aqristayaasha walaal waad ku mahadsantahay soo gudbinta barnaamishakan waana wax loo bahanyaay in bulshadeena somaliyeed qofkii qof kale wax dhaamo in uu usheego in sha alh waan sugeenaa qeybaha kale ee wacyi gelintada asc
Saed Awaare says:
December 26, 2011 at 14:09
Asc, Bashiir akhii wad Mahadsantahay runtii waxan soo wado wa arimo dad badan oo ila mida u Haraad qabeen ama ay nawilayeen, arimahan dadkena somaliyed ad bey ugu hoseyan inay isa siiyaan wanooyin wax ku oola . lkni waxan filaya in dad badan kaga fa’idesan in-sha,alah,,
December 26, 2011 at 18:08
asc, salaan ka dib waxaa u mahad celinaayaa walaal kayaga bashiir ee isku hoowlay in uu shaqo wacan qabto balse runtii maahan midaa oo kaliya tan igu qasabtay in aan fikradeyda halkaan ku soo gudbiyo. runtii waa markii iigu horeysay ee aan fikradeyda ku qiro somaliska inkasto oo aan soo booqdo maalintii ugu yaraan halmar.
aan u soo daadago muhiimada, qofka bilaabay kommentar ka waxa isku dayay intii uu dhiiri galin lahaay qof shaqo wacan qabatay in uuba ka hortago isaga oo hadalo goodin u eg soo qoro. runtii waxa uu u egyahay dadka wadan mudada joogay sida asigaba hadalkiisa laga dhadhansan karo ee jecel wax walba in ayaga looga danbeeyo. sxb soomali in dhafuran ayaa wadanka timid waxa aad sheegeysid ee aad leedahay armuu qalad kaaga imaadaana magaran.
walaal kayaga bashiir waxa uu yiri qofwalbo waxa ay fahansantahay walaalkeeda kale ha u faaideyso mana garan karo qalad ka ku jiro taa. qofka SFI dhameeyay ha u faaideeyo walaakiisa kale ee aanan dhameynin hana uu sheego sida ay ugu soora gashay in uu dhameeyo. taasi maqalad baa?
soomali hadaan nahay dadka wadankaan noogu soo hormaray ayaa magacayada ku dheelay laakin waxaa lagaaaray xiligii la sixi lahaay qalaad kii dadka naga horeeyay ay sameeyeen.
walaalka maqaal kaan tixana ha ah bilaabay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar sedaxaad waad mahad santahay.
asc wr wb salaamta islamka ka bid,
waxaan u hanbalyeynayaa walaalka bashiir oo ah qof doonaya in uu dadkiisa wax u qabto, marka waxaan leeyahay dadka soomaliyeed ka dhegeysa oo ku camal falaya wixii talo iyo tusaale ah ee alle idiinka soo qaaday sababtoo ah wax lacag ah masiineysan, waa wax barasho bilaash ah ee la socda oo keli ah mucaaqadka jahli ku dheehana iska daa fadlan.
waxaana mar labaad leehaya walaalkaa ishu howlay arrintaa hanbalyo sababtoo adiga oo ku guuleysatay oo somali oo dhan wax ku sheegay ayey la mid tahay
Till Cabdulahi says:
Akhii Cabdilaahi Waxaan Ahay Qofka Aad U Jawaabeyso Magaceyga Ahmed sxb Qalad Ayaa Iga Fahantay Aniga Waan Ku Faraxsnahay
Howsha uu bilaabay walaakey Bashiir. Sweden Qofna Qof Uma Goodin Karo Dhibna Ma Gaarsiin Karo Arinkaasna Meesha Ma Yaal Waxaan Nahay Dad Soomaaliyeed oo Walaalo Ah Dhamaanteen ., Walaalkey Bashiir Waxaan Siiyey Talo iyo Tilmaam Wax Ku ool ah Sida Aan Aaminsanahay
Adiga Shaqsiyan Ha U Fasiran xumaan Hadalkeyga Sida Hada aad u fahantay Mahadsanid
mr qurbaani 2012 says:
December 26, 2011 at 20:47
runtii wad ku mahdsantahay sida wacan aad isku xil qaantay in aad so saarto barnaamijyada kala duwan sida newska aan caalamka kala aqrisano waxa ka dhacay runtii swedan sidee ugu noolaada wa fikraad aad u fiican anigo ah mr qurbaani aad ayay iiso jiidatay
asc wanidinsalaamay dadka figradaha kadhiibtay mowduucan aadka iiga cajabiyay ee bashiir uusooqoray lama yabaayo hadii uulakulmo wax xoogaa mucarado ah lknaniga xageyga waan uriyaaqay maqaalka uu sooqoray waxaankudarsanayaa dhibka nahaysto waa xadaradaa nuguyar xoogaa lkn wan dadaalna sabta ooah qowmiyadaha kale oo wadankaan usoohajiray anagaa ugu xadarad liidano sabtoo ah jaliyadaha faraha badan oo furan ayaa usabab eh hadii halmeel nalaka hagi lahaay waa noofududaan leheed waxyaabaha uu bashiir kaqaylinaayo mahadnadiin
December 26, 2011 at 22:55
as wr. vem är du första? qabiil ma ujeedo!
waad mahadsantay walalka maqaalkan sooqoray kuwa kalena balan qaaday waa wax wacan in qofku wax uu soo bandhigo lakiin shuruud aya kahoraysa aanay soconayn la aanteed.
qofkasta oo raba inuu wax soogudbiyo taas oo uu warbaahinta lakaashanayo unasoobandhigaya bulshada.1 waa inuu isaga sharaxaad iska bixiyaa qofka uu yahay sida aqoontisa waxan uu soowadao aqoon tayo leh maw leeyay mise waa qiiro keentay mise waa wax aan sal iyo raad lahayn
2maamulka webka ayaa masuulka ah cida wax soogudbinaysa waa muhiin inay bulshada usoobandhigaan wax tayo leh oo xalaal ah
ummadaha kale kooda waxtara waytabaan_tabiyaan idinkkuna taagaad udhigtaan kii wax idintarilahaaye kadaaya hagar daamada wiilka isxilqaamay oo soo dhaweeye wixii fikrad ah e wanaagsan . Bashir waa ku mahadsan yahay dadaalka iyo dareenkaa wanaagsan aadna waannu kuu dhiirigalin web.kuna in uu faafiyo wuu ku amaananyahay . raggii dhaliisha muujiyayna wax sabab ah oon ku qanacno mayna sheegin . hadday sheegi waayaan wax sabab ah waxaan u qaadanhaynaa xasad iyo xumaan . waad mahadsantihiin
Bashiir Macalin Cali says:
Asalamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabrakaatuhu :-
Dhammaan waad salaamantihiin , dhammaantiina si wayn ayaad ii dhiira gelideen , runtiina aadbaan ugu farxay . Walaalkeeyga Qaaligaa ee Ra’yiga ugu horeeya dhiibtay fikradiisa waan soo dhawaynaa .
Walaal Bulshada Xog qaldan ka bixin maayo ee dhanka kale bulshada wax horumar gaarsiin kara ayaan la qaybsanaa .
Adiguna waxaa tahay walaalaha Dalka ku raagay , aqoon badan ayaadna u leedahay e , Waaya Aragnimada aad tiri waan uga soo shaqeeyay Bulshada , uga faa’iideey Bulshadaada anigana Sawir qaldan bulshada ka bixin maa .
masha allah waaye, afkaada caano lagu qabay, insha allah xaasidnimada Allaha naga saaro,